Rehefa mila fahefan'ny mpisolovava any UAE | Law Firms Dubai
Rehefa mila Herin'ny mpisolovava ao UAE ianao
manome fahefana ny olon-kafa
Ny herin'ny mpisolovava iray dia malemy fanahy na antontan-taratasy izay nosoniavin'ny olona iray (antsoina matetika hoe 'principal') manome alalana olona hafa (antsoina hoe 'agent' na 'mpisolovava-in-facte') mba hiasa ho an'ny tompon'andraikitra iray ao manoloana ny fety fahatelo.
IZAO no Fotoam-potoana mety!
Inona ny Herin'ny mpisolovava
Ny fahazoana ny Herin'ny mpisolovava dia miankina amin'ny herin'ny mpisolovava, ny mpandraharaha dia mety misy na iza na iza amin'ny havana, amin'ny mpiara-miasa, sakaiza, mpampiasa, na mpisolovava.
Ilaina ny herin'ny mpisolovava amin'ny toe-javatra manokana ho an'ny olona iray mihoatra ny 18 taona. Ohatra, ny miaramila dia nametraka tany ampitan-dranomasina izay mila olona hanao asa ho azy ireo raha mbola lavitra.
Ny tanora izay manao dia lavitra dia mety mitaky Herin'ny mpisolovava mba hikarakarana ny raharahany, indrindra fa raha tsy manam-bady hanao izany izy ireo. Ny fomba mahazatra indrindra aorin'ny POA dia raha miverina ny olona iray, na miatrika olana ara-pahasalamana maharitra ary tsy afaka mifindra mora foana.
Ny herin'ny mpisolovava no ampiasaina indrindra amin'ny toro-hevitra mba hahazoana antoka fa manatanteraka izay mahasoa anao indrindra ny torolàlana.
Raha tsy afaka miasa samirery ianao noho ny tsy fahatomombanana ara-batana na ara-tsaina, dia mety ho apetraka amin'ny mpandraharaha iray ny fanapahan-kevitra ara-bola mba hiantoka ny mahasoa anao. Ny sasany amin'ireny fanapahan-kevitra ireny dia ny fandoavana ny volavolan-dalàna, ny fivarotana fananana mba handoavana vola. Ny herin'ny mpisolovava dia mamaritra ny ambaratonga sy ny haben'ny asa andrasan'ny mpandraharaha iray.
Ny karazany samy hafa fahefana
Matetika ao amin'ny UAE ny olona na principe no manome fahefana amin'ny mpisolovava amin'ny olona iray azo itokisana (fantatra koa amin'ny maha-mpandraharaha azy) azy ireo. Any UAE, karazana herin'ny mpisolovava roa no hita:
Herin'ny mpisolovava ankapobeny
Herin'ny mpisolovava manokana
Herin'ny mpisolovava amin'ny ankapobeny
Ny herin'ny mpisolovava amin'ny ankapobeny dia ampiasaina any amin'ny Emirà Arabo Mitambatra raha toa ka ny tompon'andraikitra iray dia mitaky asa iray / na ireto hetsika manaraka ireto:
Fividianana sy fitantanana trano
Mifidy solontena eo alohan'ny departemantan'ny governemanta, ministre, utility, ary mpamatsy telecom
Mametraha fikambanana ara-dalàna
Fividianana fizarana amin'ny fikambanana ara-dalàna
Fividianana fiara sy kojakoja ilaina
Famandrihana sonia sy ireo antontan-taratasy hafa
Misolotena ny tompon'andraikitra amin'ny olana ara-dalàna ary manakarama mpisolovava
Ny fahefana manangana mpisolo vava miaraka amin'ireo fahefana voatanisa dia eken'ny antoko fahatelo sy ny governemanta ao amin'ny UAE.
Amin'ny tranga sasany, ny andiany fahatelo na ny departemantan'ny governemanta izay miantehitra amin'ny herin'ny mpisolovava dia mety mangataka ny hanomezana izany fahefana manokana izany mpisolovava izany izay mamaritra ny antsipirihany momba ny fifanakalozana izay asehon'ilay solontenany ny filoha. Matetika, ireto karazana tranga ireto dia:
Namidy fananana trano
Varotra ny fizarana vola amin'ny fikambanana ara-dalàna
Fifandirana amin'ny fananana
Sales ny fiara
Zava-dehibe ny lova
Neken'ny mpiambina ho an'ny fanambadiana
Ekena ny fitsangatsanganana zaza tsy ampy taona (olona latsaky ny 21 taona) miaraka amina olon-kafa ankoatry ny mpiambina ara-dalàna
Ahoana no fiasan'ny herin'ny mpisolovava?
Ny olona mila ny Herin'ny mpisolovava aloha dia hifidy olona iray hikarakara raharaha raha ary raha tsy mahavita ny hanao izany izy. Ny POA dia afaka hapetraka eo no ho eo, ny olona iray tsy afaka miatrika raharaha intsony. Tonga dia mandeha ho azy avy hatrany izy, ka afaka manomboka mihetsika ho tompon'andraikitra lehibe ilay mpandraharaha.
Na izany aza, raha tsy maintsy manangana fifanarahana ara-dalàna ianao, dia tsy maintsy atao ny fahaizan'ny mpampiasa rehefa voasintona ilay antontan-taratasy. Midika izany fa io olona io dia ho afaka hahatakatra ireo teny izay voalaza ao amin'ny fifanarahana.
Ny POA dia azo afindra na esorina amin'ny fotoana rehetra taorian'ny nahalavoana ny antontan-taratasy tany am-boalohany sy ny efa nomanina vaovao, na amin'ny alàlan'ny fanomanana antom-pomba fanavaozana izay mampahafantatra ireo rehetra voakasik'izany fa tsy manan-kery ny POA ary tokony hatsahatra avy hatrany ny fampiasana.
Koa satria ny fiteny arabo no fiteny ofisialy an'ny Emirates Arabo Mitambatra, dia tsy maintsy vokarina amin'ny endrika fiteny roa ilay antontan-taratasy
Ahoana ny sonia ny herin'ny mpisolovava ao amin'ny UAE
Ny herin'ny mpisolovava dia tsy maintsy atao sonia any UAE alohan'ny ampahibemaso mpampita vaovao alohan'ny hahatongavana ara-dalàna sy eken'ny antoko fahatelo sy ny departemanta. Misy dingana roa izay ahafahan'ny fahefan'ny mpisolovava iray miomana sy sonia:
1. Manomàna drafitra
Ny drafitry ny herin'ny mpisolo vava dia voaomana amin'ny endrika fiteny roa (anglisy sy arabo), na amin'ny endrika Arabo ihany. Ny herin'ny mpisolovava dia tsy maintsy mamolavola tsara ary mampiditra ny fahefana ilaina rehetra izay tokony hampiharana ny manampahefana amin'ny tompon'andraikitra. Rehefa voaomana ny fahefan'ny mpisolovava dia hivoaka avy eo am-boalohany avy eo am-boalohany mba hosoniavina alohan'ny mpampanoa lalàna iray.
2. Soraty eo alohan'ny filazam-baovao malaza
Amin'ity dingana ity, hisy mpitsikera malaza any UAE hotsidihina hanao sonia ny fahefan'ny mpisolovava amin'ny dingana iray antsoina hoe fanoratana ny herin'ny mpisolovava. Ny tompon'andraikitra dia tsy maintsy hiseho mivantana amin'ny mpampahalala vaovao mba hanao sonia / hanazavana ny herin'ny mpisolovava. Tsy voatery voatery ho any ilay mpandraharaha.
Raha vao manasonia ny fahefan'ny mpisolovava ny talen'ny mpitsikilo, dia hosokafana avy hatrany ny mpampahalala vaovao ary hisoratra anarana iray tany am-boalohany ao amin'ny firaketana fitsarana ofisialy ary hamerenany ireo loharano roa ho an'ny tale. Rehefa vita io dia afaka manomboka mampiasa ny herin'ny mpisolovava ny mpandraharaha ankehitriny. Ity dingana rehetra ity dia afaka mandray na inona na inona amin'ny 20 minitra ka adiny iray, arakaraka ny andro.
Ahoana ny fanasoniavana ny herin'ny mpisolovava any ivelany any UAE
Raha manam-pahefana mpisava lalana voasonia ivelan'ny UAE, ary hampiasaina ao anaty UAE, ny herin'ny mpisolovava dia tsy maintsy mandalo ny fizotran'ny fangatahana ara-dalàna sy ny fanamarinana ao amin'ny firenena niaviany, ary koa tao amin'ny UAE. Ity dia dingana roa:
1. Fanamarinana ara-dalàna sy fanamarinana ao amin'ny firenena niaviany
Ireo dingana ireo dia ho tanterahana aloha ivelan'ny UAE alohan'ny hitondrana ny herin'ny mpisolovava ao UAE.
Ny lohandohany dia hanao sonia ny herin'ny mpisolovava iray alohan'ny mpampahalala vaovao any amin'ny firenena mponina.
Vantany vao voasonia ny fahefan'ny mpisolovava dia voamarina ao amin'ny antontan-taratasy ny ministeran'ny raharaham-bahiny na ny departemantan'ny governemanta mitovy amin'izany.
Ny masoivoho / consulat any UAE any amin'ny firenena onenana dia hanamarina ny herin'ny mpisolovava farany.
2. Ao UAE
Aorian'ny dingana 1, ny herin'ny mpisolovava dia azo entina any UAE mba ho vita ny dingana fanamarinana. Manaraka ireto dingana ireto:
Ny minisitry ny raharaham-bahiny UAE dia tsy maintsy manindrona ny herin'ny mpisolovava aloha.
Avy eo dia mila adika amin'ny teny arabo ireo mpandika teny ara-dalàna izay omen'ny alàlan'ny ministeran'ny fahamarinana manatanteraka ny fandikana ara-dalàna.
Rehefa vita ny fandikana ny teny arabo, ny minisitry ny fitsarana UAE dia hanamafy io fandikana ny herin'ny mpisolovava io.
Ahoana ny hanafoanana ny herin'ny mpisolovava ary hanolo ny mpampiasa anao
Amin'ny fotoana rehetra misafidy anao, ny herin'ny mpisolovava dia azo foanana na inona na inona antony. Mba hanaovana izany dia tokony hatao an-tsoratra ny fanafoanana amin'ny alàlan'ny fanambarana fanafoanana ny herin'ny mpisolovava ary tsy tokony hampivadi-po amin'ny mpampanoa lalàna anao. Ny taratasy fanafoanana POA dia tsy maintsy atao sonia alohan'ny besinim-bahoaka ary dia afaka manapa-kevitra ny hampahafantatra ilay mpandraharaha amin'ny alàlan'ny bailiff of Notary public, na amin'ny alàlan'ny mailaka voasoratra anarana.
Raha te hisolo mpisolo toerana ianao na manova ny votoatin'ny herin'ny mpisolovava dia tsy maintsy averina an-tsoratra aloha ny antitra, mba tsy hisy fiantraikany ara-dalàna alohan'ny hamoahana fahazoan-dàlana vaovao iray. Ny herin'ny mpisolovava dia mijanona tsy manan-kery rehefa maty ny filoha iray, ary misy ny antontan-taratasy hafa toa an'i Will sy Testamenta.
POA: Antontan-taratasy manan-danja iray
Ny olon-dehibe rehetra dia mila herin'ny mpisolovava